Jaaliyadda Soomaaliyeed oo Beenisay in Lagu Xadgudbo Soomaalida Ku Dhaqan Dubai | SAHAN ONLINE
Jaaliyadda Soomaaliyeed oo Beenisay in Lagu Xadgudbo Soomaalida Ku Dhaqan Dubai
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Emaaraadka (UAE) ayaa beeniyay warar la faafiyay oo sheegayay in Xadgudub,tacadiyo iyo dhibaatooyin loo gaysto Soomaalida ku nool Imaraada Dubai.
Qoraal ay jaaliyadu warbaahinta soo Gaasiiyay ayaa u qornaa Sidatan.
Faafinta warar meel ka dhac ku ah maqaamka ganacsatada Puntland iyo kan ummada Soomaaliyeed.
Koox sheegatay inay yihiin ganacsato Soomaaliyeed oo dhawaan ku kulmay magaalada dekada ah ee Bosaaso ayaa eedayn usoo jeediyay dalka Emaraatka, sheegayna in lagu xadgudbo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool (U A E).
Safaaradda Soomaaliyeed ee Emaraatka ayaa lagu tilmaamay mid daciif ah oo ay sheegeen inay garab ka waayeen ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi. Waxa iyana la magacaabay maamulada dalka Soomaaliya sida Jubbaland oo qoraalkan lagu sheegay inuu danbiyo aan cadayn loo hayn ka galay Soomaalida Emaraatka.
Jaaliyadda Dubai waxa kale oo ay daboolka ka qaadaysaa in aanay jirin dad u xiran dawladda Emaraadka, dadka la xirayna uu xarigoodu ku saleysan yahay fal danbiyeed u gaar ah, balse aanay jirin cid lagu takrifalay xuquuqdii ay ku lahaayeen dalkan aanu walaalaha nahay.